July 2017 - Shop
Shop > All Articles > 2017 > July
Mobile Week 2017 : Xiaomi Day0294
The KaungHtet July 8, 2017 8:25 am July 8, 2017
Android ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေကြားမှာ ရေပန်းအစားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ Xiaomi အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ နာမည်ကြီးပြီးသား တခြားအမှတ်တံဆိပ်တွေထက်စာလျှင် Xiaomi ဖုန်းတွေက ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့အတွက် အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ သုံးစွဲသူတွေကြား တဟုန်ထိုးနာမည်ကြီးလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားထိပ်တန်းနာမည်ကြီးဖုန်းတွေမှာသာ ပါဝင်တဲ့ အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Xiaomi …
Mobile Week 2017 : Xiaomi0302
The KaungHtet July 8, 2017 8:14 am July 8, 2017
Among thousands of Android phone users, Xiaomi is one of the most popular mobile phone brands in Myanmar. To compete …
Mobile Week 2017 : Lenovo0298
The KaungHtet July 7, 2017 8:37 am July 7, 2017
Welcome to 5th day of Mobile Week 2017 ! Like every day Shop.com.mm is pushing sales on particular phone brand, …
Mobile Week 2017 : Lenovo0268
The KaungHtet July 7, 2017 2:45 am July 7, 2017
Mobile Week 2017 ရဲ့ ၅ရက်မြောက်နေ့ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်…Shop.com.mm က Mobile Week 2017 ပွဲတော်ကြီးကို တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးတဲ့ လျှော့ဈေးတွေ အထူးစိတ်ဝင်စားစရာ Flash Sales အစီအစဉ်တွေနဲ့ နေ့စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်…ဒီနေ့မှာတော့ Shop.com.mm ကနေ …
Mobile Week 2017 : Singtech Day0319
The KaungHtet July 6, 2017 3:44 am July 6, 2017
Shop.com.mm ရဲ့ Mobile Week 2017 ကို ကျင်းပခဲ့တာ အခုဆိုရင် လေးရက်မြောက်နေ့ရှိပါပြီ။ Mobile Week ဆိုတာ Brand အမျိုးမျိုးက ဖုန်းတွေကို ဘယ်မှာမှမရနိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ရောင်းချပေးနေတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအရောင်းပွဲတော်ဖြစ်ပြီး ဈေးကြီးတဲ့ …
Mobile Week 2017 : Singtech Day0289
The KaungHtet July 6, 2017 3:34 am July 6, 2017
It has been three days that Shop.com.mm is celebrating Mobile Week 2017 offering mega discounts on brand-new phones and other …
Mobile Week 2017 : Huawei Day0285
The KaungHtet July 3, 2017 11:00 am July 3, 2017
Introducing Mobile Week launching and Samsung Flash Sales on Day 1, Shop.com.mm gains massive orders withinafew hours after …
Mobile Week 2017 : Huawei Day0292
Shop.com.mm ရဲ့ Mobile Week 2017 မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအရောင်းပွဲတော်ကြီးကို အောင်မြင်စွာ စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Week ရဲ့ ပထမဆုံးနေ့မှာ Samsung ဖုန်းတွေကို အကောင်းဆုံးလျှော့ဈေးတွေ၊ နာရီပိုင်းအတွင်းသာ ရောင်းချတဲ့ Flash Sales တွေနဲ့ …
Samsung နှင့် Shop.com.mm တို့ပူးပေါင်း၍ အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းများကို ယူဆောင်လာမည့် ၂၀၁၇ခုနှစ် Mobile Week ဈေးရောင်းပွဲတော်0325
The KaungHtet July 2, 2017 9:06 am July 2, 2017
မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ ကျင်းပတော့မယ့် မိုဘိုင်းလ်ဈေးရောင်းပွဲကြီးအကြောင်း သိပြီးကြပြီလား? ဒီနှစ်မှာလဲ အရင်နှစ်ကလို Shop.com.mm မှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ဖုန်းချစ်သူတွေဆီကို အရောက်ယူဆောင်ပေးလာပါပြီ။ Mobile Week ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ဇူလိုင်လ ၃ရက်နေ့မှ ၉ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး Brand …
Samsung collaborates with Shop.com.mm to bring the mega deals during Mobile Week 201701285
Are you ready for super big mobile sales coming in Myanmar? We are bringing the great news to all mobile …